Xal u helida is maandhaafka u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada iyo Daladaha waxbarashada oo kulan laga yeeshay – Radio Muqdisho
Xal u helida is maandhaafka u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada iyo Daladaha waxbarashada oo kulan laga yeeshay
Kulankaan oo ay culimada Soomaaliyeed la qaateeen mas’uuliyiinta wasaarada waxbarashada xukuumada Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa is maandhaafka soo kala dhex galay wasaarada iyo daladaha waxbarashada dalka kaasoo salka ku haya qaadista imtixaanaadka mideysan ee ay qaadeyso wasaarada marka la gaaro 13 bishaan June .
Culimada ayaa waxaa ay wasaarada la wadaageeen in ay kulan la soo qaateeen mas’uuliyiinta daladaha wax barashada dalka isla markaana ay ku soo qanciyeen in ay taageeraan lana shaqeeyaan wasaarada isla markaana wasaarada ay ugu imaadeeen in ay ku dhiiri galiyaan howsha wanaagsan eee ay bulshada u hayso isla markaa waxaa ay u soo jeediyeeen culimadu madaxda wasaarada in imtixaankaasi uu yahay mid ka qayb qaadanaya hormarinta tacliinta.
Waxaa goob joog ahaa kulankaas dhanka wasaarada waxbarshada iyo bar baarinta wasiir ku xigeenka wasaaradaasi mudane Xaamud Cali Xasan iyo agaasimaha guud ee wasaarada waxaana uu wasiir ku xigeenku uga mahad naqay culimada dadaalkooda ku aadan xalinta arintaan waxaana uu u balan qaaday in ay wasaaradu diyaar u tahay in ay la tashato qaybaha bulshada.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan afhayeenka Hay’ada culimada Soomaaliyeed ayaa markii uu soo idlaaday kulanka ay wasaarada la qaateen waxaa uu faah faahin ka bixiyay qodobadii ugu muhiimsanaa.
Wasaarada wax barashada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay u tayey lahayd waxbarashada Soomaaliya isla markaana dalka oo dhan loo gaarsii lahaa in hal waqti imtixaanka laga qaado ardada hal manhajna loo sameeyo waxbarashada 13 June ayaana qorshuhu yahay in ardada dugsiyada sare ee bartamaha iyo koofurta dalka wax ka barata laga qaado Imtixaan mid ah.
Ciidan ilaaliya canshuuraha oo tababar loo soo xirey
Xildhibaan Dhuxulow oo Caruurta Caseeyashaa hotelada ugu sameeyey Sandaqado ay ku shaqeystaan(Sawirro)